အိပ်ခန်း ၁ ခန်း
အိမ်များ in Newark
အိမ်များ in New Jersey
အိမ်များ in Turtle Creek
အိမ်များ in Dallas
အိမ်များ in Texas
အိမ်များ in Country Day Meadows
အိမ်များ in Benbrook
အိမ်များ in Mckinney
အိမ်များ in Shoal Creek
အိမ်များ in Garland
အိမ်များ in Frisco
အိမ်များ in Plano
အိမ်များ in Henderson
အိမ်များ in Old East Dallas
အိမ်များ in Vickery Meadows
1 - 10 ၏ 515 စာရင်းများ
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 4791 sq feet
မြင်ကွင်း အိမ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည်5days ago
A fabulous leasing opportunity! Recently updated kitchen with new cabinetry, granite countertops, wine cooler and stainless steel Thermador appliances. Marble entryway and Large living space with fireplace. Master bedroom has sitting area with fireplace, Master bath is complete with large walkin sho...
ငှားရန် |2အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 3000 Sq feet | 0.967 Acre
Dallas in Texas (United States), 75219
ထုတ်ဝေသည် Michael Kelly
မြင်ကွင်း အိမ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
House For Rent In Benbrook, Texas
This Beautiful3Bedroom,2Bathroom Condo Overlooks the Trinity River, is Across from the Community Pool and is Walking Distance to The Waterside. The Waterside Offers Some Great Shopping and Best Restaurants in Fort Worth! The Property Boasts Hard Surface Flooring Downstairs. Kitchen has Granite C...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1155 Sq feet | 0.098 Acre
Benbrook in Texas (United States), 76109
ထုတ်ဝေသည် Vivian Thielke
Gorgeous, fully furnished townhouse in McKinney! You'll enjoy amazing features such as3bedrooms, 2.5 bathrooms,2car-garage, new stainless steel appliances, new toiletries, granite countertops and much more. Just minutes from highway 75 and 380. This townhouse isamust see! The application fee i...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1633 Sq feet | 0.068 Acre
Mckinney in Texas (United States), 75071
ထုတ်ဝေသည် Marvin Stewart Jr
House For Rent In Garland, Texas
This isabeautiful property with ALL the upgrades!With hand scraped hardwood floors, granite countertops, custom cabinets and high end stainless steel appliances as well asacommunity pool, this isaMust See!A hidden gem away from the noise and traffic while at the same time quick access to Georg...
ငှားရန် |2အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1661 Sq feet | 0.06 Acre
Garland in Texas (United States), 75044
ထုတ်ဝေသည် Keith Noblett
House For Rent In Frisco, Texas
Beautiful craftsman style town home in Frisco! Entering the home, you are greeted byaformal dining room withacanal view to the right, and study with french doors to the left! Gourmet kitchen with oversized island. Beautiful upgrades specially selected byaprofessional designer. Additional study...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 2236 Sq feet | 0.052 Acre
Frisco in Texas (United States), 75034
ထုတ်ဝေသည် Swapnil Sharma
House For Rent In Plano, Texas
Luxury Living and Fabulous Location!! This Beautifully Maintained Townhome with fresh paint throughout is within walking distance of the exclusive restaurants and shopping at The Shops of Legacy and Legacy West, and located within minutes of Highways and Corporate Headquarters! The Tri Level floor p...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 2020 Sq feet | 0.02 Acre
Plano in Texas (United States), 75024
ထုတ်ဝေသည် Lisa Maddox
Long Term lease available: This3bed, 3.5 bath nestled in the Know-Henderson area is the perfect location with access to HWY 75 and minutes from Downtown. Master on third level with an additional bedroom that can work as private home office or nursery. Spacious kitchen, quartz counters, stainless, ...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|4ရေချိုး | 2021 Sq feet | 0.037 Acre
ထုတ်ဝေသည် Russell Ambers
Townhome located near Baylor Hospital, minutes from Lakewood, White Rock Lake, Uptown, West Village. Luxurious high-end finish out. Handscraped hardwood floors, ceramic tile and carpeting in bedrooms. Granite countertops, stainless steel appliances, glass stand up shower, double vanity sink, walk in...
ငှားရန် |2အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1446 Sq feet | 0.5 Acre
ထုတ်ဝေသည် Dee Hawkins
You must see this MOVE-IN READY2bedroom, 2.5 bath condo near shopping, biking trails, Presby Hospital, and minutes from 75. This condo is spacious with ample storage and NATURAL LIGHT. The first level hasatwo car garage with an oversized finished basement room and laundry closet forafull size ...
ငှားရန် |2အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1997 Sq feet | 1.235 Acre
ထုတ်ဝေသည် Carie Dallmann
ယူနိုက်တက်စတိတ်အမေရိကန် (ယူအက်စ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်) ဟုလူသိများသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ပြည်နယ် ၅၀၊ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်၊ အဓိကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၅ ခုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ စတုရန်းမိုင် ၃.၈ သန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉.၈ သန်း) သည်ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းအကျယ်အဝန်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ့တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အများစုသည်မြောက်အမေရိကအလယ်ပိုင်းတွင်ကနေဒါနှင့်မက္ကဆီကိုကြားတွင်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေလူ ဦး ရေ ၃၂၈ သန်းရှိပြီးအမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးနိုင်ငံ (တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယပြီးလျှင်) ။ မြို့တော်မှာဝါရှင်တန်ဒီစီဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမှာနယူးယောက်မြို့ဖြစ်သည်။ Paleo-Indians များသည်ဆိုက်ဘေးရီးယားမှမြောက်အမေရိကတိုက်သို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ဥရောပကိုလိုနီပြုခြင်းသည် ၁၆ ရာစုတွင်စတင်ခဲ့သည်။ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောဗြိတိသျှကိုလိုနီ ၁၃ ခုမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်ကိုလိုနီများအကြားအငြင်းပွားမှုများစွာကြောင့် ၁၇၇၅ မှ ၁၇၈၃ အတွင်းအမေရိကန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလွတ်လပ်ရေးသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုတစ်လျှောက်လုံးတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်မြောက်အမေရိကတွင်ကျယ်ပြန့်သောတိုးချဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနယ်မြေအသစ်များထပ်မံရရှိလာသည်။ အမေရိကန်များမှလူများကိုအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းနှင့်ပြည်နယ်အသစ်များကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်းသည် ၁၈၄၈ ခုနှစ်အထိတိုက်ကြီးကိုစတင်လည်ပတ်သည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုဒုတိယပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်သည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ စပိန် - အမေရိကန်စစ်ပွဲနှင့်ပထမကမ္ဘာစစ်တို့ကနိုင်ငံ၏ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်မှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နျူကလီးယားလက်နက်များထုတ်လုပ်သည့်ပထမဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွင်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်းအမေရိကန်နှင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့သည်အာကာသပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၆၉ Apollo 11 မစ်ရှင်၊ လူသားတို့ကိုလသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆင်းသက်စေသည့်အာကာသယာဉ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲအပြီး ၁၉၉၁ တွင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဖယ်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ (အိုစ်)၊ နေတိုးနှင့်အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်သောအမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂျီဒီပီအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပြီး ၀ ယ်လိုအားညီမျှမှုအားဖြင့်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့ဂျီဒီပီ၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်တန်ဖိုးအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတင်သွင်းသူနှင့်ဒုတိယအများဆုံးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏လူ ဦး ရေသည်ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်း၏ ၄% ရှိသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိစုစုပေါင်းကြွယ်ဝမှု၏ ၂၉.၄% ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၀ င်ငွေနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကွာဟမှုများရှိသော်လည်းအမေရိကန်သည်ပျမ်းမျှလုပ်အားခ၊ ပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေ၊ ပျမ်းမျှကြွယ်ဝမှု၊ လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တစ် ဦး ချင်းဂျီဒီပီနှင့်အလုပ်သမားကုန်ထုတ်စွမ်းအားများအပါအ ၀ င်လူမှုစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်များအတိုင်းအတာအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်ရေးအသုံးစရိတ်၏သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ထိပ်ဆုံးစစ်အင်အားဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင်ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအင်အားစုဖြစ်သည်။
အိမ်တစ်လုံးသည်ရိုးရှင်းသည့်နေအိမ်များမှဆင်းသက်လာသောခြေသလုံးလူမျိုးစုတဲများနှင့်ရှန်တီမြို့ရှိရှုပ်ထွေးသော shack ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောနေအိမ်များမှသည်ရှုပ်ထွေးသော၊ သစ်သား၊ အုတ်၊ ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စနစ်များပါ ၀ င်သည့်ရှုပ်ထွေးသော၊ ပုံသေအဆောက်အအုံများအထိအိမ်တစ်လုံးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။   မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းစသည့်နေရာများသို့မိုးမရွာစေရန်အိမ်များသည်မတူညီသောခေါင်မိုးစနစ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ အိမ်များသည်နေရာထိုင်ခင်းကိုလုံခြုံစေရန်နှင့်သူခိုးများနှင့်အခြားကျူးကျော်သူများထံမှကာကွယ်ရန်တံခါးများသို့မဟုတ်သော့များရှိသည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုများရှိသမားရိုးကျခေတ်သစ်အိမ်အများစုတွင်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းများ၊ မီးဖိုချောင်နှင့်ချက်ပြုတ်သည့်နေရာနှင့် living ည့်ခန်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်တွင်သီးခြားထမင်းစားခန်းရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ မြောက်အမေရိကရှိအိမ်ကြီးအချို့တွင်အပန်းဖြေခန်းရှိသည်။ ရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးကို ဦး စားပေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သောကြက်များသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ (ဥပမာ - ကျွဲနွားကဲ့သို့) ကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်လူတို့၏အိမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမျှဝေနိုင်သည်။ အိမ်တစ်လုံးတွင်နေထိုင်သောလူမှုရေးယူနစ်ကိုအိမ်ထောင်စုဟုလူသိများသည်။ များသောအားဖြင့်အိမ်ထောင်စုသည်မိသားစုတစ်စုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အိမ်ထောင်စုများသည်အခန်းဖော်များကဲ့သို့သောအခြားလူမှုရေးအုပ်စုများဖြစ်နိုင်သည်၊ အချို့အိမ်များသည်မိသားစုတစ်ခုသို့မဟုတ်အလားတူအရွယ်ရှိအုပ်စုတစ်စုသာနေထိုင်ရန်နေရာရှိသည်။ townhouses သို့မဟုတ် row house များဟုခေါ်သောပိုကြီးသည့်အိမ်များသည်တူညီသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်မိသားစုများစွာနေထိုင်နိုင်သည်။ အိမ်တစ်လုံးကိုကားတွေအတွက်ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်သုံးစက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်သွန်းလောင်းသည့်အဆောက်အအုံများနှင့်အတူလိုက်ပါလာနိုင်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်တွင်အိမ်နောက်ဖေးသို့မဟုတ်အိမ်ရှေ့ခြံရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်နေထိုင်သူများအပန်းဖြေရန်သို့မဟုတ်စားနိုင်သည့်နောက်ထပ်နေရာများဖြစ်သည်။